डिशहोम फाइबरनेट छ महिनाभित्र मुलुकका सबै प्रमुख शहरहरूमा, के के छन् छुट सुविधा ?| Corporate Nepal
Wednesday, June 23, 2021 | बुधबार ०९ असार, २०७८
डिशहोम फाइबरनेट छ महिनाभित्र मुलुकका सबै प्रमुख शहरहरूमा, के के छन् छुट सुविधा ?
जेठ २१, २०७८ शुक्रबार १९:३३
काठमाडौं । डिशहोम फाइबरनेट छ महिनाभित्र मुलुकका सबै प्रमुख शहरहरूमा पुग्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ९० प्रतिशत ठाउँमा सेवा विस्तार गरिसकेको डिशहोमले छ महिनाभित्र मुलुकका सबै प्रमुख शहरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न लागेको हो ।
आकर्षक छुट सुविधासहित सेवा विस्तार गरिरहेको डिशहोमले एक लाख ७५ हजार घरमा इन्टरनेट सेवा दिनसक्ने आफ्नो क्षमता विकास गरिसकेको सन्दर्भमा सेवा विस्तारमा पनि आक्रामक भएको हो । अहिले काठमाडौं बाहिर हेटौडा बजार, इनरुवा, इटहरीमा डिशहोमको फाइबरनेट पुगिसकेको छ भने धरान र विराटनगरमा दुई हप्ताभित्रमा डिशहोम फाइबरनेट सुरु गर्न लागिएको छ । पोखरामा पनि नेटवर्क तयारी अवस्थामा रहेको र निषेधाज्ञाले मात्रै कही ढिलो भएको कम्पनीका महाप्रवन्धक रमेश सोपकोटाले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा नेटवर्क तयारी अवस्थामा छ । निषेधाज्ञाले गर्दा रिलिज गर्न नपाएको मात्रै हो । हाम्रो योजना भनेको अबको छ महिना अर्थात डिसेम्बरसम्ममा मेजर सिटीहरू सबै ठाउँमा पुग्छौं ।
गत बर्ष मात्रै सेवा सुरु गरेको डिशहोम फाइबरनेटको अहिले ४२ वटा पीओडी पुगिसकेको छ । यो भनेको एक लाख ७५ हजार ग्राहकलाई इन्टरनेट सुविधा दिनसक्ने क्षमता भइसकेको सापकोटाले बताए ।
डीटीएच प्रविधिमा आधारित टेलिभिजन सेवा प्रदायक डिशहोमले आफ्ना टिभीका सक्रिय ग्राहकलाई १० एमबीपीएसको इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, डिशहोमका एचडी टेलिभिजनको प्याकेज खरीद गर्ने ग्राहकले मासिक थप २३३ रुपियाँ तिरे २५ एमबीपीएसको इन्टरनेट सेवा पनि प्राप्त हुन्छ । तर डिशहोमका धेरै ग्राहकलाई यी सुविधाहरूबारे जानकारी नहुँदा अवसरबाट बन्चित हुनु परेको महाप्रवन्धक सापकोटाले बताए ।
उनले भने, ‘हामी सक्दो छुट सुविधा दिएर गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पनि विस्तार गरिरहेका छौं । धेरै ग्राहकलाई हामीले दिइरहेका छुट सुविधाबारे जानकारी नभएकाले पनि उहाँहरू सर्वसुलभरुपमा सेवा पाउने अवसरबाट बन्चित हुनु परेको छ । हामी ग्राहकहरूलाई सुसुचित पनि गर्दैछौं ।’
कम्पनीका अनुसार नियमितरुपमा डिशहोमको सेवा लिइरहेका सबै ग्राहकले १० एमबीपीएसको इन्टरनेट सित्तैमा पाउँछन् । तर सुरुमा जडान र राउटरको चार्ज भने तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि रिचार्ज गरेअनुसार नियमितरुपमा यो सेवा निःशुल्क प्राप्त भइरहन्छ । यो सुविधाबारे जानकारी पाउन थालेपछि धेरै ग्राहकले अहिले डिशहोम फाइबरनेट भकाभक जडान गर्न थालेको सापकोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, डिशहोमको फुल प्याकेज किन्नेले मासिक छ सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले थप जम्मा २३३ रुपियाँ तिरेमा २५ एमबीपीएसको अनलिमिटेड इन्टरनेट सुविधा पनि पाउन सकिन्छ । अहिले कम्पनीले आफ्ना फुल प्याकेजका ग्राहकलाई रु. २३३ थपेर डिशहोम फाइबरनेट सुविधा पनि लिन आग्रह गर्न थालेको छ । यसले डिशहोमका ग्राहकहरूलाई चर्को शुल्क तिरेर अर्को इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिएको छ ।
अहिले डिशहोमले १०० एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ । चाँडै नै १५० र २०० एमबीपीएसको प्याकेज पनि सुरु गर्ने महाप्रवन्धक सापकोटाले बताए ।
असार ६, २०७८ आइतबार
साठी जिल्लामा सतप्रतिशत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुग्योः प्राधिकरण
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध भए जानकारी दिनु– प्राधिकरण
असार २, २०७८ बुधबार
एनटीएलाई आइएसपीको प्रश्न– आफै मनलाग्दी लाइसेन्स बाँड्ने, आफै यस्तो भएन, उस्तो भएन भन्ने ?
जेठ १८, २०७८ मंगलबार
रूखमा तार बाँध्दा इन्टरनेटको गुणस्तर खस्किन्छः प्राधिकरण, पोल हामीले गाड्ने होइनः सेवा प्रदायक
सीजी कम्युनिकेसन्सद्वारा इन्टरनेट सेवा सुरु, अरुभन्दा आधै सस्तो पर्ने
कोभिड महामारीलाई मध्यनजर गर्दै एनसेलले ल्यायो विभिन्न राहत प्याकहरू
बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन लागेका छौंः प्रवक्ता, धितोपत्र बोर्ड
बैंकका कर्मचारीलाई सवा सात अर्बको बोनस व्यवस्था, कुन बैंकले कति बाँड्लान ?
‘स्मार्ट लकडाउन’मा यसरी खुल्छन् बैंक तथा वित्तीय संस्था (जिल्ला प्रशासनको सूचनासहित)
समाजसेवामा लागेकी संग्रौलालाई दुःख दिन पक्राउ गरिएको भन्दै रिहाई गर्न उपाध्यायको माग
आगामी सातादेखि ‘स्मार्ट लक डाउन’, खुला हुँदैछन् यी क्षेत्र
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा भीष्म ढुंगाना र निरज गिरिबीच चर्कियो विवाद
आन्तरिक उडान असार १७ देखि गर्न स्वीकृति, दैनिक ७५ वटासम्म उडान हुने
असार ९, २०७८ बुधबार
टाटा मोटर्सद्वारा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूभी गाडीको बुकिङ्ग चाँडै खुल्ने घोषणा
किन भूकम्प र बाढी पहिरोले निजी क्षेत्रकै जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्छ ?
मेलम्चीमा रु. एक अर्बको क्षति, अब २ महिनामा उपत्यकामा खानेपानी नआउने
सन् २०२१ भित्रै सबै नागरिकलाई कोरोना बिरुद्धको खोप लगाइन्छः प्रधानमन्त्री